Ireo mpamatsy maska ​​sy maso - Mpanamboatra maska ​​masoko
Saron-tava landy vita amin'ny lamba landy
Endri-javatra vokatra Ny fanaovana sarontava mason'andriana dia hahatonga anao hahatsiaro ho maivamaivana kokoa ary afaka hatory torimaso haingana na torimaso lalina na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra ary mifohaza miala sasatra sy mamelombelona. Namboarina landy 100%, ny eyemask dia mahatsiaro tena malefaka sy malama amin'ny hoditrao manodidina ny masonao ary misy vokany tsara amin'ny fanakanana ny jiro. Izy ireo dia mora entina ary kely hidina ao anaty kitapo fivezivezena mora foana. Drafitra Logo amin'ny peta-kofehy: fehin-kibo vita amin'ny landy; Print Logo Version: bandy elastika fonosina landy. Solid Ve ...
Saron-tory landy famolavolana landy
Sarontava maso manokana vita amin'ny landy
Saron-tory poly satin
Fahavalon'ny torimaso ny fahazavana, koa io mpiasa manao fahagagana io dia manampy anao hahita maizina tanteraka na aiza na aiza zzzz. Ny sarontava aminay dia vita amin'ny satin malemilemy .ary fehiloha ho fehiloha ho fanajana ny fanaonao amin'ny alina - amin'ny ankapobeny dia tsy misy kilema io. Saron-tava masom-borona satin malefaka miaraka amina lahatsoratra manokana, dia hanome fanomezana miavaka tsara ho azy! • habe: iray habe mifanaraka amin'ny ankamaroany (fehikibo azo ovaina). Ekena ny haben'ny mahazatra. • fandrefesana: haben'ny olon-dehibe - 20cm x 10cm, haben'ny ankizy - 17cm x 8cm • fitaovana: Satin • Mu ...
saron-tava landy miaraka amina sary famantarana
Saron-tava modely vita amin'ny landy vita amin'ny landy
Saron-tory landy tsara tarehy
Saron-tory landy manokana
Saron-tava vita amin'ny landy manokana
Saron-tava landy mihaja